ပြင်သစ်သံရုံးမှ သတင်းများ - La France en Birmanie
ကြိုဆိုခြင်း > သတင်းများ > ပြင်သစ်သံရုံးမှ သတင်းများ
Applications are now open for the 2020 “Liberty, Equality, Fraternity” Human Rights Prize of the French Republic, awarded by the Prime Minister of the French Government.
Candidates must submit their complete application, before the deadline of 18 October 2020.
နိုငျငံတကာ လိငျတူခဈြသူမြား၊ လိငျပွောငျးထားသူမြားနှငျ့ လိငျတူလိငျကှဲနှဈမြိုးလုံးခဈြသူမြားအပျေါ မုနျးတီးမှုမြားကို ဆနျ့ကငျြတိုကျဖကျြရေးနေ့ (မလေ ၁၇ ရကျ)တှငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ပွငျသဈသံရုံးသညျ လိငျပိုငျးဆိုငျရာတိမျးညှတျမှုနှငျ့ကြားမရေးရာလက်ခဏာမြား မခှဲခွားဘဲ လူအားလုံး တနျးတူညီမြှအခှငျ့အရေး ရရနျအတှကျ ကတိကဝတျကိုထပျလောငျးအတညျပွုပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့သညျ LBTIQ ပုဂ်ဂိုလျမြားရငျဆိုငျရသော စိနျချေါမှုမြား ၊ ခှဲခွားဆကျဆံမှုနှငျ့အကွမျးဖကျမှုပုံစံအားလုံးကိုရှုတျခပြါသညျ။
LGBTIQ အခှငျ့အရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ တိတျဆိတျစှာမနရေနျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ပွငျသဈသံရုံးနှငျ့ ပွငျသဈယဉျကြေးမှုဌာန၏ လှုမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမြားတှငျ ရုပျရှငျ၊ ဓာတျပုံဇာတျလမျးနှငျ့ အှနျလိုငျးတငျဆကျမှုမြားကို မလေ ၁၇ ရကျမှ ၂၂ အထိ စီစဉျတငျဆကျသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
The French Development Agency (AFD) is mobilized to respond to the global health emergency by launching the "Covid-19 - Health in common" initiative on9April 2020. As part of this initiative, it granted additional funding of2million euros in grants on 28 April 2020 for the ECOMORE II regional project.
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Christian Lechervy ၊ ပြင်သစ်သံရုံး နှင့် ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (AFD) တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် Merieux Foundation တို့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနသို့ ယနေ့ ၂၃ရက်၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အလည်အပတ်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော်အခါတွင် ဧပြီလ (၁၅)ရက်၊ (၁၆)ရက်နှင့် (၁၇)ရက်နေ့တို့၌ ပြင်သစ်သံရုံးပိတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ် နှစ်သစ်တွင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်း ပြင်သစ်သံရုံးအဖွဲ့သူ၊ အဖွဲ့သားများအားလုံးမှ (...)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပစ်စကာ (PISCCA) က အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် တက်ကြွဆောင်ရွက်သူအစုအဖွဲ့များအား ဆန်းသစ်တီထွင် စီမံကိန်းများဆိုင်ရာ အဆိုပြုလွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) မှ (၁၈) ရက်နေ့ထိ တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီးသို့သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီးအား နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး Christian Lechervy အား ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်သစ်ကုန်သွယ်ရေး ဋ္ဌာန၏ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုကဏ္ဍတွင် လုပ်ဆောင်ချက်များအကြာင်းကြေညာခြင်း
ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ ၇ ခု ပါဝင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ၊ တနင်္လာနေ့တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။